air condition – Healthy Life Journal
All posts tagged "air condition"
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အခုချိန်မှာ ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် Pulse Oximeter စက်လေးတွေနဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို တိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး ဆရာ။ A. SpO2 ဆိုတာ Oxygen Saturation ကိုသုံးတာပါ။...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အခုခေတ်မှာ လေအေးပေးစက် အပြည့်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရုံးခန်း၊ အလုပ်ခန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရတာက စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုလို ဖြစ်လာနေပါတယ်။ တကယ်တော့ လေအေးပေးစက်က ပူအိုက်စွတ်စိုတဲ့ ရာသီဥတုမှာ လူတွေကို နေရတာသက်သောင့်သက်သာရှိစေပြီး လေအေးလေသန့်ရရှိစေလို့ အမောပြေစေပါတယ်။ အဆောက်အအုံတွေက အလွန်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ကားထဲအဲကွန်းဖွင့်ပြီး အိပ်စက်တာက ကျန်းမာ ရေးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိပါသလဲဆရာ။ A. ကားကိုအလုံပိတ်ပြီး အဲကွန်းဖွင့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပိုင်းပြောရပါမယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ကားမောင်းရင်းနဲ့ အိပ်ငိုက်နေတယ်၊ အဲဒီလိုအိပ်ငိုက်တဲ့အချိန်မှာ ငိုက်ရင်းနဲ့ ကားမမောင်းသင့်ပါဘူး။ ငိုက်ရင်းကားမောင်းရာက ယာဉ်မှောက်တာ၊...